भारतको बारेमा रूखहरू | Absolut यात्रा
आजको समाजमा स्टिरियोटाइपको अवधारणा अझ बढी महत्त्व पाइरहेको छ। हामी तिनीहरूसँग बाँचिरहेका छौं, उनीहरू पूर्वाग्रहहरूसँगको सम्बन्धको कारण उनीहरू दोहोर्याइन्छ वा आलोचना गरिन्छ। यो एक सबैभन्दा विवादास्पद मुद्दाहरू मध्ये एक हो जुन स्थायी रूपमा समीक्षा अन्तर्गत छ।
यात्रा स्टिरियोटाइपहरू र पूर्वाग्रहहरूको बिरूद्ध सब भन्दा राम्रो औषधि हो। यसले हाम्रो दिमागलाई एक हजार तरिकामा खोल्छ र हामीलाई संसार र सामान्य रूपमा जीवनमा धेरै चीजहरू बुझ्न परिपक्व बनाउँछ।
सबै देशहरूमा स्टिरियोटाइपहरू छन्। उदाहरणका लागि कि इ England्ल्याण्डमा खाना एकदम खराब छ, फ्रान्समा उनीहरू धेरै गर्व गर्छन् वा स्पेनमा सबैलाई फ्ल्यामेन्को नृत्य कसरी गर्ने भनेर थाहा छ। यही कुरा भारतजस्ता टाढाका देशहरूमा पनि हुन्छ। तर, भारतको बारेमा सब भन्दा साधारण रूढीहरू के हो?
1 स्टीरियोटाइप के हो?
2 भारतका बारेका रूखहरू के हुन्?
2.1 भारतीय खानाको साथ सँधै सावधानी अपनाउनुहोस्
2.2 भारतीयहरू सर्प आकर्षक हुन्
2.3 भारतीयहरू गरिब छन्, तर खुशी छन्
2.4 भारत अराजक र उपेक्षित छ
2.5 भारतीयहरू हिन्दी बोल्छन्
2.6 सबै भारतीय महिलाहरूले साडी लगाउँदछन्
2.7 सबै भारतीयहरू योग गर्छन् र नमस्ते भन्छन्
2.8 गाईहरू सडकहरूमा घुम्छन्
स्टीरियोटाइप के हो?
आरएई (रोयल स्पेनिश एकेडेमी) का अनुसार एक स्टीरियोटाइप "एक छवि वा विचार हो जुन एउटा समूह वा समाजले प्राय: अपरिवर्तनीय चरित्रको साथ स्वीकार गर्दछ।" त्यो हो, कुनै व्यक्तिहरूको विशेषताहरू, गुणहरू वा व्यवहारहरूको समूहको बारेमा विश्वास गर्न सक्नेको सामान्य धारणा। यी स्टीरियोटाइपहरू सामाजिक रूपमा निर्माण गरिन्छन् र कुनै ठाउँको चरित्र वा चलनहरूको विचार दिन्छन्.
भारतका बारेका रूखहरू के हुन्?
भारतीय खानाको साथ सँधै सावधानी अपनाउनुहोस्
भारतीय खाना स्वादिष्ट छ! यद्यपि तपाईंले सायद धेरै अवसरहरूमा सुन्नुभएको छ, त्यो जब तपाईं देश यात्रा गर्नुहुन्छ तपाईं होशियार हुनुहोस् किनकि यदि तपाईं सडक स्टोल्समा खानुहुन्छ भने तपाईंलाई नराम्रो लाग्न सक्छ। वास्तविकतामा, यो त्यस्तो चीज हो जुन हामी शंकास्पद स्वच्छताका स्थानहरूमा खाना किनेका छौं वा यदि हामी बोतलको पानी पिउँदैनौं भने कहिँ पनि हुन सक्छ।
केही न्यूनतम दिशानिर्देशहरूको साथ, तपाईं प्रसिद्ध पापीको ग्यास्ट्रोएन्टेरिटिस पीडित वा ज्वरोको केही दशौंमा पीडित बिना भारतीय भोजनको मजा लिन सक्नुहुन्छ। ओब्स गर्न आवश्यक छैन!
अर्कोतिर त्यहाँ स्टिरियोटाइप छ कि सबै भारतीय खाना मसलादार छन्। धेरै व्यक्तिहरू भारतीय खाना प्रयोग गर्न मन पराउँदैनन् वा हिचकिचाउँदैनन् किनभने उनीहरू विश्वास गर्छन् कि सबै भाँडाकुँडाहरू मसलादार छन् र यसले तिनीहरूलाई पेट दुख्ने छ किनकि उनीहरूलाई यसको प्रयोग छैन, तर सत्यबाट अरु केहि छैन।
यो क्लिच हो किनकि सबै भारतीय खाना मसलादार हुँदैनन्। वास्तवमा त्यहाँ दालहरू छन् कि दाल मखानी, दालको सूप ताजा धनियाले स्वाद दिएका छैनन्। वा कोरमा सॉस, एक प्रकारको हल्का करी नट र क्रीमबाट बनाइएको। हामी या त राइटा सास बिर्सन सक्दैनौं, काकडी र दहीको साथ बनेको जुन कुनै पनि थाल ताजा हुन्छ।
भारतीयहरू सर्प आकर्षक हुन्
धेरै मानिसहरु भारतीयहरु सर्प मनमोहक हुन् भन्ने विश्वास गर्छन्। यद्यपि वास्तविकता त्यो हो मनमोहक सर्पहरूको अभ्यास केही स्थानहरूमा कानुनी होईन त्यसैले भारतमा निषेध गरिएको छयद्यपि केहि सर्प आकर्षकहरू आज पनि अवस्थित छन्।
भारतीयहरू गरिब छन्, तर खुशी छन्
जब फिल्म स्लमडग मिलियनेयर रिलीज भयो, तब बस्तीमा प्रतिबिम्बित गरीबीले कार्य देखायो जहाँ बाँकी विश्वमा भारतको धारणामा ठूलो प्रभाव पारेको थियो। धेरै यात्रुहरू गरीबीको स्थिति देखेर छक्क पर्दछन् जहाँ भारतमा धेरै मानिसहरू बस्छन्, दिनहुँ कठिनाइहरूको सामना गर्दै एक मुस्कानको साथ। तर लोकप्रिय धारणाको विपरित, सम्पूर्ण देश गरीब छैन।
यस ग्रहका सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरू भारतमा बस्छन् र शैक्षिक र रोजगारीमा सुधारका कारण हालसालै सम्पन्न मध्यमवर्ग उदय हुँदैछ। अधिक र अधिक व्यक्तिहरू गरीबीबाट उम्किए र राम्रो जीवनमा पुगेका छन्।
भारत अराजक र उपेक्षित छ
यद्यपि त्यस्ता क्षेत्रहरू हुन सक्छन् जुन अझ सुसज्जित र ट्राफिक कहिलेकाँही अराजकपूर्ण हुन्छ, भारतमा सबै देशहरूमा जस्तै पार्कहरू, लक्जरी होटेलहरू र शपिंग सेन्टरहरू, राम्रा रेस्टुरेन्टहरू र नाइटक्लबहरू प्रशस्त छन्। दुबै स्थानीय र पर्यटकहरूको मनोरन्जनको लागि फेसन)।
भारतीयहरू हिन्दी बोल्छन्
यो स्टिरियोटाइप विदेशमा व्यापक छ। धेरै मानिसहरु लाई "हिन्दू" शब्दले धर्म र भारतको आधिकारिक भाषा दुबै लाई बुझाउँछन् भनेर गल्तीले विश्वास गर्दछन्। यद्यपि यो केस भाषा होईन किनकि हिन्दू धर्मका अभ्यासकहरूलाई हिन्दु भनिन्छ।
अर्कोतर्फ, हिन्दी भाषा देशको एकमात्र भाषा होइन किनकि प्रत्येक क्षेत्रको आफ्नै भाषा हुन्छ। धेरै यात्रीहरु यो कुरा सुनेर छक्क परे कि त्यहाँ भारतीयहरु छन् जो हिंदी बोल्दैनन् तर यो एक वास्तविकता हो। वास्तवमा केही विद्यालयहरूमा हिन्दी पढाउँदैन र यो विशेषगरी दक्षिण भारतमा द्रविड मूलका भाषाहरू बोल्ने गरिन्छ।
हिन्दी एक भाषा हो जुन उत्तर भारतमा मुख्यतया बोल्दछ तर धेरै भारतीयहरूको लागि यो उनीहरूको दोस्रो भाषा हो। अ ,्ग्रेजी, यस बीचमा, देश भर मा व्यापक रूपमा बोल्दछ।
सबै भारतीय महिलाहरूले साडी लगाउँदछन्
साडी भारतका महिलाहरूको परम्परागत पोशाक हो र सांस्कृतिक आइकन हो। "साडी" शब्द संस्कृतबाट आएको हो र यसको अर्थ "कपडा ब्यान्ड" हो किनकि यो पोशाक टाउको माथि पारित गरिएको टाउकोको निर्बाध टुक्राले बनेको छ र टाउको जस्तो महिलाको शरीरमा लपेट्छ।
यो एक सुन्दर, रमणीय र कालातीत सूट हो। यद्यपि भारतीय महिलाहरूले साडी मात्र लगाउँदैनन् किनकी उनीहरू औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा अन्य प्रकारका पोशाक लगाउँदछन्। उदाहरण को लागी, दैनिक प्रयोगका लागि त्यहाँ महिलाहरु छन् जो सलवार कमीज लगाउँदछन् (विशेष गरी उत्तर भारतमा सलवार कमीज (लुगा ट्युनिक र प्यान्ट्स सहित बनेको)। अरूले दुबै फ्यासनहरू संयोजन गर्दै ठूला शहरहरूमा पश्चिमी लुगाहरू छान्छन्।
सबै भारतीयहरू योग गर्छन् र नमस्ते भन्छन्
योग एक अभ्यास हो जुन, विभिन्न आसनहरू र व्यायामहरू मार्फत, सास, दिमाग र शरीरलाई जोड्दछ। भारतीयहरूले शताब्दीयौंदेखि यसको फाइदाहरू जानेका छन् तर पश्चिममा हालसालै यो धेरै लोकप्रिय भएको छ। यसैले धेरै विदेशीहरूले भारत र यसको संस्कृतिलाई आध्यात्मिक मक्काको रूपमा सोच्दछन्। यद्यपि सबै भारतीयले दैनिक जीवनमा योग समावेश गर्दैनन्। यो स्टिरियोटाइप हो।
अर्कोतर्फ, जबकि नमस्ते शब्द देशको संस्कृतिको अभिन्न अंग हो, ठूला शहरहरूमा हाल औपचारिक परिस्थितिहरूको लागि वा वृद्ध व्यक्तिहरूसँग कुराकानीको लागि आरक्षित छ। यस बाहेक, यो उत्तरी क्षेत्रहरुमा अधिक सामान्य छ जहाँ शुद्ध हिन्दी बोल्छ जबकि दक्षिणी भारतमा जहाँ यो पहिलो पहिलो भाषा छैन त्यहाँ कम प्रयोग गरिन्छ।
गाईहरू सडकहरूमा घुम्छन्
जब हामी भारतको बारेमा सोच्दछौं पहिलो तस्बिर मध्ये एक पवित्र गाई हो। के तिनीहरू साँच्चिकै भारतका शहरहरूमा सडकहरूमा घुम्छन्? यो सहि छ, यो स्टिरियोटाइप सही छ। तिनीहरूलाई कुनै शहरमा पैदल हिड्दै गरेको देख्न तपाईंलाई लामो समय लाग्दैन। तिनीहरू शान्तपूर्वक ट्राफिकमा हिड्दछन्, त्यसैले ड्राइभरहरू दुर्घटनाबाट बच्न सावधान हुनुपर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » भारतको बारेमा रूखहरू